Ny fanerena avy amin'ny demonia hery dia zava-misy | Apg29
Ny fanerena avy amin'ny demonia hery dia zava-misy
Ankehitriny dia te-hanambara ny ratsy indrindra aho, efa nandalo eo amin'ny lafiny fanerena avy amin'ny demonia hery.
Ny fanerena avy amin'ny demonia hery dia zava-misy izay emanates avy amin'ny fanahy ratsy izao tontolo izao. Live ny Kristianina, araka izay efa fanahy ny fanomezana fanombanana matetika mahatsapa izany tsindry. Izaho no tena saro-pady amin'ny fanahiko ary afaka mijoro ho vavolombelona ny fomba mahatsapa trangan-javatra ity.
Raha mivoaka amin'ny tanàna aho, dia hihaona olona izay manana ny hatsiaka sy ny lozabe aminy ny fanahiko ato. Dia mahatsiaro ho toy ny hoe "mampieboebo" maloto amiko avy ny olona.
Ny mifanohitra amin'izany - raha mihaona ny olona amin'ny fanalefahana mampieboebo ny renirano ny mamy avy amin'ny olona.
Demonia hery ny tavoahangy toaka
Lasa aho indraindray, ary any an-dafin'i Systembolaget demonia fantatra hery breather amin'ny tavoahangy toaka. Koa fantatro ny demonia herin 'ny setro-tsigara.
Raha misy singa nasty fandaharana ao amin'ny TV mampieboebo maloto miaramilany hamely ahy. Koa izany no tsy ratsy sy manimba programa.
Amin'ny fandaharam-potoana mialoha Programming tatitra matetika ho zavatra izay afaka ny fanahy izay maloto i Jesosy nosasany tamin'ny ra sarobidin'i. Noho izany, dia manakimpy ny masony sy hitazona ny sofiny mba tsy nahita sy nandre azy ireo.
Mahatsapa mozika rock mavesatra demonia, indrindra fa rehefa misy singa Satana. I tsy mihaino toy izany "mozika", satria mahatsapa izany izany nasty. Tsy tiako vatolampy mozika amin'ny ankapobeny. Fa efa nandre toy izany, fa mba maniry izany.
Fotoana maro izay, dia nipetraka tany amin'ny toerana mpangalatra bisikileta teny amin'ny hetsika. Aho voaroba ny bisikileta, izay efa natsangan'i ivelan'ny trano izay nipetrahako. Raha Tadidiko tsara, ny bisikileta dia nihidy, nefa mbola nangalatra.
Nisy olona nanome ahy ny Soso-kevitra hankany Vahoaka Park, fa izay olona nampiasa ny handao ny nangalarina bisikileta.
Nankatò aho Filan-kevitra ka nandeha ho any amin'ny kianja hitady ny bisikileta. Nandeha manodidina mijery eny rehetra eny. Entertainment ny zava-nitranga dia nifarana sy ny olona efa nandao ny zaridaina, saingy nahatsapa mafy ny fanahiko ao fa ny fanahy ratsy nijanonjanona. I niaina toy izany eerie rivo-piainana.
Aho fa tsy ho afaka hitsidika ny sarimihetsika, dihy hetsika, ara-panatanjahantena na fialam-boly hafa toerana. Aho miaina toy izany maloto sy ny nasty rivo-piainana izay efa tsy niaritra ny ho any.
Ny ratsy indrindra Efa niaina
Ankehitriny dia te-hanambara ny ratsy indrindra aho, efa nandalo eo amin'ny lafiny fanerena avy amin'ny demonia hery. Niainako ivelany sy ao amin'ny Vasaloppet ao Mora-trano.
Ny an-tranon'ny Vasaloppet dia bytardagar ny Vasaloppet fanjaitra. Ny olona nampiasa ny hipetraka any sy ny fifanakalozana, nividy sy nivarotra azy. Nanana ny vadiko fa handeha hamidy, ka dia nanaraka azy ho any an-tranon'i Vasaloppet. Dia tahaka anay nijanona teo ivelan'ny fidirana ho any amin'ny efitrano aho dia nahatsapa sy nieritreritra hoe: 'Tena nasty toe-po manjaka eto. "
Avy eo dia niditra tao an-vestibule, izay nahatsapa maloto, nasty rivo-piainana na dia matanjaka.
Ao amin'ny efitra iray ambany rihana dia misy ireo izay nanova ny fanjaitra dia nipetraka teo ny latabany. Izahay nidina tany ka nahita fa nisy olona maro teo, izay te-hametraka ny fanjaitra.
Nihazakazaka demonia hery manoloana ahy
Rehefa niditra ny efitrano Nipoaka ny demonia miaramilany hamely ahy tamin'ny hery lehibe. Nahatsapa ho toy ny lehilahy mahery nanosika ahy ny olona nihemotra. Efa saika very ny mahay mandanjalanja, ary efa ho lavo eo.
Fa avy eo dingana ny Fanahy Masina amin'ny hery mahery ato anatiko, tahaka ny counterweight tafika manohitra ny demonia. Nahatsapa ho manandratra ary nentin'ny Fanahy Masina.
Fanahy ratsy izao tontolo izao
Isika izay voavonjy dia nisy fanahy ratsy izao tontolo izao mba hiady. Ny fahefana dia na inona na inona milalao miaraka. Aho tena afaka hiaina. Tsy maintsy ho feno ny Fanahy Masina dia ho velona noho ny ran'i Jesosy ny fiarovana tokony harovana.
Jesosy no nandresy ny herin'ny ratsy. Efa avo sy ny fitaovam-piadiany ny mpitondra fanjakana ny amin'ny loza. Efa nanorotoro ny lohan'ilay menarana, ary nanao ny devoly ny fahefana na inona na inona. Misy tenin 'Andriamanitra, izay manamafy ny herim-po sy mitondra fankaherezana:
"Ny zanaka malala, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy azy, fa izay ao aminareo dia lehibe noho izay eo amin'izao tontolo izao" (1 Jn. 4: 4).